मिर्गौला असफल हुनुको कारण, पत्थरी प्रमुख कारक – डा. सुबोध रेग्मी | Hakahaki
मिर्गौला असफल हुनुको कारण, पत्थरी प्रमुख कारक – डा. सुबोध रेग्मी
पत्थरी भएकाहरूलाई १० वर्षको अवधिमा फेरि दोहोरिने सम्भावना करिब ५० प्रतिशत हुन्छ । पत्थरीपीडितमध्ये करिब आधाजसो दोस्रोपटक समेत पत्थरीको समस्यामा पर्ने भएकाले हामीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । पत्थरीको कारण पत्ता लगाएर त्यसको रोकथाममा ध्यान दिइयो भने धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ । स्वाथ्य खबरपत्रिकामा युरोलोजिष्ट डा. सुबोध रेग्मीको विचार छ ।